Faah-faahin: Al Shabaab Oo Weerar Ku Qaaday Fariisin Ciidan Oo Dhaca Dagmada Afgooye – Somali Top News
July 30, 2018 Somali Top News	0 Comments
(STN-MUQDISHO):-Xoogag hubaysan oo ka tirsan Ururka Al Shabaab ayaa xalay fiidkii waxa ay weerar ku qaadeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan fariisin ciidamo ka tirsan dowladda ay ku lahaayeen agagaarka Buundada Yar.
Dadka degaanka ayaa warbaahinta waxa ay u sheegeen inay maqleen weerar ku bilowday bambada gacanta laga tuuro, oo socday wax ku dhaw 30 daqiiqo, intaasi kadibna ay dareemeen cabsi.
Saraakiisha ammaaanka ayaa waxa ay sheegeen ciidamada inay iska difaaceen ragga weerarka soo qaaday, maadaama markii horeba ay ku jireen feejignaan dheeri ah.
Ilo wareedyo ayaa waxa ay sheegeen labada dhinac ee dagaalka dhexmaray inuu soo kala gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawac ah, balse aanay xaqiijin karin khasaaraha dhabta ah.
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay halkaasi naga soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan dowladda ay wadaan hawlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo, waxaana xiran wadada gasha goobtii uu weerarka ka dhacay.
Dhinaca kale Shabaab war ay ku soo qoreen baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay ku sheegteen inay xalay weerareen bar kontorool oo ku taalla inta u dhaxeysa degaanada Lafoole iyo Ceelasha Biyaha, halkaasi oo labada dhinac uu ku dhexmaray dagaal toos ah.
Ururka Al Shabaab ayaa dhawr mar oo hore waxa ay ugu qaadeen fariisimo ciidanka dowladda ay ku leeyihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, ilaa hadda dowladda iyo Koonfur Galbeed ma aanay sameyn talaabooyin ay kaga hortagayaan dagaalada Shabaab.
← Madaxweynaha Puntland Oo Diiday In Dagaalka Tukaraq Lagala Hadlo
Madaxweyne Farmaajo Oo Booqday Mashaariic Horumarineed Oo Dalka Ereteriya Laga Fulineyayo+Sawirro →
Axmad Madoobe oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al shabaab
October 14, 2019 Somali Top News 0
Ciidamada Dowladda Iyo AMISOM Oo Al Shabaab Kala Wareegay Deegaan Hor Leh
Muxuu yahay ujeedka kulan dhexmaray Madaxweynaha Koofur Galbeed iyo Saraakiil ka socotay UNSOM?